ngomphathi ku 18-08-23
HVAC idinga unokuqiniseka ukuba ufumana iimveliso ezisemgangathweni kunye nenkonzo nanto. contactors yethu Air ongenisa kunye baphinde kuya kukunceda kwiinkqubo zolawulo HVAC.
Zokuhlala kunye Small Products Business
Ukususela itshintshela stylish neziseko, ukuba izisombululo ulawulo ekhaya kakuhle, ukuba bazilile Ukuwisa tshaja isithuthi yombane, esikubeka amanqanaba ezintsha ezintsha kunye dhawo. Nofuel iqinisekisa ubomi Ivuliwe amakhaya kunye namashishini amancinci.
Isizukulwana esitsha ngokupheleleyo benza okuchasene zeesekethe, contactors, baphinde eninzi zeBRT umthwalo ubungakanani ezisixhenxe ukuya ku 250 kW ilungele ukusetyenziswa kwiqela emiswa seemodyuli apho isakhiwo yolawulo kulula. panel yolawulo uKhuphiswano ukuba North American emarikeni kunye ul 508 kunye ul 1077 ukuhlangabezana UL5 ...
Zokukhusela umbane kunye noLawulo
NM1 wethu Series MCB inkqubo distribution amandla eliphantsi-ombane ezintsha, smart, kakuhle, kwaye zithembeke. Le nkqubo olupheleleyo lokukala yaye amandla ombane kancinci, eninika yokusebenza ufuna. Kuba amashishini ezixhomekeke izixhobo zombane, esweni okokoko izixhobo zombane ...
Nofuel eV Ukutshaja indawo esetyenziswa kuzo zonke iindawo zokupaka: iiofisi, iihotele, iivenkile, mabutho, municpals, etc.and eV Ukutshaja wallbox ezinamacandelo zethu Ukutshaja ukhuseleko oko ke ngoko inokusetyenziswa kwiindawo ezinzima: emakhayeni kwiipropati zabucala (condominium, corporate park imoto, hote ...
Thina Ukukhetha ngokubanzi contactors, baphinde ukucima kombane, kokuqala iimoto, isixhobo Pilot kunye nokudluliselwa itshintshela yolawulo motor ukusuka 3hp ukuba 600hp @ 480V 7A-800A AC-1, AC-3 3phase, 4 kwiSigaba, AC12V ukuya AC 660V, DC12V ku DC440V ezininzi izicelo ukuhlangabezana ethile intswelo yakho mveliso. iimveliso zethu ...
Upha imveliso yonke, inkqubo kunye noshishino isisombululo izibonelelo ukuhanjiswa amandla kweemarike zokuhlala, zorhwebo, zoshishino kunye eluncedo. Eli candelo linikezela iphothifoliyo olwahlukahlukeneyo lwezimo nokuhanjiswa kwamandla kunye neemveliso nokukhuselwa wesiphaluka, bagqume uluhlu ukususela 120 V ukuya 24 kV ....